Taliyaha Ciidanka Asluubta oo sheegay in Duqa Muqdisho uu dhagax dhigay dhul ay leeyihiin Asluubta - Jowhar Somali Leader
Home News Taliyaha Ciidanka Asluubta oo sheegay in Duqa Muqdisho uu dhagax dhigay dhul...
Taliyaha Ciidanka Asluubta oo sheegay in Duqa Muqdisho uu dhagax dhigay dhul ay leeyihiin Asluubta
Taliyaha ciidamada Asluubta Soomaaliyeed Gen. Mahad C/raxmaan Aadan ayaa ku eedeeyay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho inuu dhagax dhigay dhul ay leeyihiin ciidamada Asluubta, iyadoo ay dhisanayaan dad shacab ah oo boobaya.
Shir jaraa’id oo Taliye Mahad ku qabtay xafiiskiisa ayaasheegay in dhulkii ciidamada Asluubta ee Xabsigii Keydsaney oo hadda isbitaal ahaan ku shaqeeya loo sharciyeeyay dad shacab ah oo uu dhagax dhigay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir dhulkii ciidamada Asluubta oo la boobayo.
Waxaa uu sheegay in dhulka Keydsaney oo Asluubta la siiyey sanadkii 1980-kii, balse haatan ay tahay Goob Isbitaal ah, balse waxaa uu xusay in shirkad lagu magacaabo Dhul iyo Guri ay si sharci darro u qaadatay dhulkii Asluubta, waxaana uu tilmaamay in shirkadaas wax ku leeyihiin Mas’uuliyiin waa weyn oo dowladda ka mida sida xildhibaano, kuwo hore iyo mas’uuliyiiin kale.
Taliyaha Ciidanka Asluubta ayaa sheegay in boob lagu haayo dhulkii danta Guud ee Ciidamada Asluubta, kuwaasoo ku yaalla Lafoole, Ex. Kontrol ,Jazeera, Balcad iyo meelo kale.
Ugu dambeyn waxaa uu ugu baaqay madaxda dowladda inay arrintan wax ka qabtaan isagoo sheegay inay ku dhiman doonaan haddii loo fasaxo, ayna gaarsiinayaan madaxda dalka dhammaan dhulalka laga boobayo ciidamada Asluubta.